Otu esi ewepu akụkọ mkpuchi na Microsoft Edge | Nzukọ mkpanaka
Otu esi ewepu akụkọ mkpuchi na Microsoft Edge
Cristian Garcia | | Nkuzi
Ọ ka nwere ike ịtụ gị n'anya, mana enwere ndị na -aga n'ihu na -eji Microsoft Edge maka ọtụtụ ebumnuche. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghịzị eze ahịa nke nwere Google Chrome na Mozilla Firefox ma ọ bụ Opera mana ọ ka nọ ebe ahụ, na -eguzogide mmiri ozuzo. Ọtụtụ ndị ọrụ ka na -amasị ochie Explorer ma ha nwere ikike ịga n'ihu na -eji ihe nchọgharị Microsoft n'ihi na ha na -aga n'ihu na -akwado ya. Mana ịkwesighi ịmasị ihe niile na ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ịnọ ebe a bụ maka ị chọrọ ịmụta ka esi ewepu ozi na mkpuchi Microsoft Edge. Anyị ga -enyere gị aka imezu ya n'oge edemede a.
Kedu ihe bụ Microsoft Edge na ihe mere ka ọ dị iche na ihe nchọgharị ndị ọzọ
N'oge na -adịghị anya gara aga, Microsoft malitere imepụta ụdị ihe nchọgharị ya ka mma wee wuo akụkụ nke ndị na -eme nke ọma n'oge ahụ. Na ihe a niile Microsoft kpebiri imepụta ihe nchọgharị ya dabere na Chromium, asụsụ mmemme nke eji eme Opera ma ọ bụ Google Chrome, abụọ n'ime ndị eze ihe nchọgharị ugbu a. Kemgbe ahụ, Microsft Edge agbakeela ma ugbu a karịrị nde ndị ọrụ 600 n'ụwa niile. Ị ga -ahụkwa na ọ bụ ihe nchọgharị ndabara na -abata na PC ọhụrụ, ekwesịrị ikwu ya. Mana n'ọnọdụ ọ bụla, ọnụ ọgụgụ a na -eme ka anyị hụ na ọ bụrụ na ị gbalịsie ike n'ịmepụta ihe, ezigbo ngwaahịa nwere ike ịpụta.
N'agbanyeghị nke ahụ, ikekwe ị nweghị mmasị na ihe niile Microsoft Edge nwere inye, gụnyere akụkọ dị na mkpuchi. Ma ọ bụ na ọ bụrụ na Google meriri maka ihe, ọ bụ n'ihi nke ya ịdị mfe na ịdị mfe. O tinyekwara nke ahụ na ihe nchọgharị ya na -agbakwunye akụkụ ndị ọzọ mere ka ọ nwee ihe ịga nke ọma. Ọ bụ ya mere anyị ga -eji mee ka ihe nchọgharị gị bụrụ ụzọ gị site na edemede a, dị mfe na karịa ihe niile anyị ga -ewepụ ozi na mkpuchi Microsoft Edge.
Gịnị bụ mkpuchi akụkọ Microsoft Edge?
Ị nwere ike ịbụ onye ọhụrụ na Microsoft Edge ma ị maghị ihe isiokwu a gbasara tupu agbanyụọ ya. Ma ọ bụ na ọ nọ ebe ahụ, ọ na -enye gị nsogbu ma ị naghị akpọ ya aha. Ọ dị mma, nke mbụ anyị ga -akọwa ihe isiokwu a gbasara.
Nri akụkọ ma ọ bụ mkpuchi akụkọ nke Microsoft Edge bụ isi otu isiokwu na -apụta oge ọ bụla imepere ihe nchọgharị Microsoft ma ọ bụ oge ọ bụla imepe taabụ ọhụrụ site na ọkọ. Tupu ị kpebie weebụsaịtị ị chọrọ ịga, akụkọ niile dị ebe ahụ. Ihe na -emekarị bụ na enwerekwa ọtụtụ mgbasa ozi maka ihe dị iche iche na -anaghị amasị anyị na ọ bụ ya mere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ ihe nchọgharị Microsoft Edge ji achọ iwepụ ha.
Ọtụtụ oge akụkọ ahụ nwere ike ịba uru ma ọ bụ nwee mmasị. Akụkụ nke ọzọ nke oge na -abụkarị mgbasa ozi anyị achọghị ịhụ. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike chọọ ịhụ ka ihu igwe dị mgbe ị mepere taabụ ọhụrụ ma ọ bụ hụ onye meriri egwuregwu otu ikpeazụ mana ọtụtụ ndị ọzọ anaghị eme ya. N'ihi na Anyị ga -akụziri gị otu esi ewepụ ozi a niile na Microsoft Edge na ngalaba na -esote site n’isiokwu a.
Kedu otu esi ewepụ akụkọ mkpuchi na Microsoft Edge? Nzọụkwụ nzọụkwụ
Iji mezuo ebumnuche nke akụkọ a, wepu akụkọ ahụ na mkpuchi Microsoft Edge, naanị ị ga -eso usoro ndị anyị hapụrụ gị n'okpuru:
Iji malite, ị ga -enweta bọtịnụ ngwa ọrụ, wiil nke anyị niile maara yana na Microsoft Edge bụ dị na akuku aka nri elu nke ibe weebụ ajụjụ (kpachara anya, ọ bụghị na ihe nchọgharị, na weebụ ka anyị tinyere gị na foto). Ugbu a na ngalaba imepụta ibe ị ga -ahọrọ menu omenala. N'ime menu ahaziri iche, ị ga -emerịrị ya wepu igbe nke akpọrọ gosi njikọ ngwa ngwa. N'ụzọ dị otu a, njikọ ngwa ngwa nke egosiri na akụkụ ala nke igbe ọchụchọ ga -apụ n'anya kpamkpam.
Iji mechaa anyị ga -aga na menu Fund. N'ebe ahụ ị nwere ike họrọ Nhọrọ nke nhọrọ ụbọchị ka ọ bụrụ ozugbo ịbanye na Microsoft Edge, a na -egosipụta otu onyonyo a oge niile nchọnchọ ọchụchọ Bing gosipụtara. Na-aga na ngalaba ọdịnaya ị ga-ahọrọ igbe ndenye nke ọdịnaya nwere nkwarụ. Ọ bụrụ na ị furu efu, ị nwere obere paragraf ndị a obere ntuziaka na onyonyo. Ọ bụ ezie na ọ naghị enwe nnukwu mfu ma dị mfe.
Ka anyị na -eme mgbanwe nke nta nke nta na nhọrọ igodo, ị ga -ahụ na ihe niile na -eme ozugbo. Nke ahụ bụ ikwu, A na -etinye ya n'ọrụ ka ị pịrị ma ọ bụ wepu nhọrọ ọ bụla Microsoft Edge na -enye. N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga -achọ imechi Microsoft Edge ma mepee ihe nchọgharị ọzọ ebe ọ bụ na ụdị Internet Explorer ọhụrụ a na -abịa ngwa ngwa na njikere site na ụlọ ọrụ.
Gbanwee igwe nyocha na Microsoft Edge Chronium
Echegbula ma tụgharịa dịka ị masịrị n'ihi enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ nke ị nwere ike ịhụbeghị mbụ. Na n'eziokwu, dị ka anyị gwara gị na mbụ, Microsoft Edfge ọhụrụ ahụ dabere na Chromium. Na nke ahụ pụtara na o nwere ọtụtụ nhọrọ nhazi dị ka ụmụnne ọhụrụ ya bụ Google Chrome na Opera. Ọ bụ ihe niile gbasara ịmụta ihe ọ na -enye yana ịmara ka igwu egwu ịhapụ ya ka ọ na -atọ onye ahịa ọ bụla ụtọ.
N'ụzọ dị otu a ugbua anyị gaara amụta ka esi ewepu ozi na mkpuchi Microsoft Edge na -enweghị nsogbu. Ị chere na ọ gbagwojuru anya, nri? Ha agaghị enye gị nsogbu ọzọ na mkpuchi ahụ, ị ​​ga -enwekwa ọmarịcha onyonyo nke ị kpebiri idobe. Dịka ọmụmaatụ, ezinụlọ gị, nkịta, ndị enyi gị ma ọ bụ egwuregwu vidiyo nke masịrị gị.
Anyị nwere olile anya na edemede a enyerela gị aka na site ugbu a gaa n'ihu, ị ga -ama ka esi eme nhọrọ Microsoft Edge ozugbo Anyị mepere nhazi nkeonwe gị ntakịrị. Nhọrọ ọ bụla ọzọ nke dakwasịrị gị ma ọ bụ nke ịchọrọ ịma gbasara ihe nchọgharị Microsoft ọhụrụ, ị nwere ike hapụ ya na igbe nkọwa ka anyị nwee ike nyochaa ya wee zaa gị. Hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nkuzi » Otu esi ewepu akụkọ mkpuchi na Microsoft Edge
Otu esi agbanyụọ Chọta My iPhone
Otu esi ahụ batrị nke AirPods